Maraykanka, 18 December 2016
Axad 18 December 2016
Saameynta Dhaca Loo Geystay Shirkadda Yahoo
Dhawaan ayaa waxaa ay burcada internetku jabsatey boga internetka ee shirkadda Yahoo, iyagoo heley xogaha malaayiin qof oo isticmaasha Iimeeylada iyo hababka kale ee isgaarsiinta ee shirkadu isticmaasho.
Trump oo Magacaabay Xoghayaha Arrimaha Dibedda
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa madaxa shirkadda ExxonMobil, Rex Tillerson u magacaabay xoghayaha cusub ee arrimaha dibedda.
China oo Walaac ka Muujisay Hadalka Trump
Dowladda China ayaa maanta sheegtay in “Walaac dhab ah” ay ka qabto hadal kasoo yeeray madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo su’aal ka keenay in Mareykanka uu sii wado siyaasadiisa “Hal China” illaa dowladda China ay ka sameyso tanaasullo ganacsi.
Xaliimo Aadan oo tartanka quruxda ka qeybgashey
Xaliima Aadan oo ah gabar Somali Mareykan ah ay ay noqotey gabadhii ugu horeysay ee iyadoo xiran dhar asturan iyo Xijaab ay tartantey, Tartanka quruxda oo lagu qabtey magaalada Minneapolis.
Ruushka oo lagu Eedeeyey inuu Jabsaday Doorashadii Maraykanka
Madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama ayaa amar ku siiyey hay’adaha wardoonka ee Maraykanka inay si sal-ballaadhan dib ugu eegaan wararka la xidhiidha in Ruushku uu jabsaday agabkii doorashooyinka Maraykanka ee sannadkan dhacay.
Dhalinyaro Deeq u Uruurisay Abaaraha
Waxaa socda dadaalo lagu doonayo in loogu gurmado dadka abaartu saamaysay, Waiyaha VOAda ee gobolka Minnesota ayaa waraysi la yeeshay laba dhalinyaro ah oo olole u galay sidii qaaraan loogu ururin lahaa abaaraha Somalia.
Ilhan Omar oo Sheegtay in La Handadey
lhaan Cumar oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhawaan loo doortey aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa sheegtay inuu handadey wadihii taksi ay raacday.
Obama oo Jeediyey Khudbadda Amniga Qaranka
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shaley jeediyey khudbadiisii ugu danbeysey ee ammaanka qaranka.
Mareykanka oo Ka Digay u Safarka Ethiopia
Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa sii wadda inay muwaadiniinteeda uga digto halista uga iman karta u safarka dalka Ethiopia.
Trump oo Magacaabaya Xoghayaha Difaaca
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta si rasmi ah ugu dhowaaqo xoghayaha cusub ee gaashaandhigga Mareykanka, marka uu booqdo gobolka North Carolina.
Hadalka John Kerry oo Laga Dhibsaday Israel
Hadal uu jeediyey xoghayaha arrimaha dibedda Mareykanka John Kerry ayaa warbaahinta Israel waxa ay si deg deg ah ugu qeexeen dhalleeceyn xooggan iyo kuwa aan diblomaasiyad ahayn.
Walaaca Soomaalida Columbus iyo Dadaalkooda
Kadib markii uu dhacay weerarki lagu eedeeyey Cabdirisaaq Cali Cartan ee Jaamacada Ohio, magaalada Columbus todobaadki hore ayaa Soomaalida ku nool gobolkaasi Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus waxaa ay muujiyeen cabsi ay ka qabaan in dhacdadaasi ay sameyn ku yeelato iyaga.